ခါဘစ် ပွဲပျက်. . . . ဘာစီလိုနာ ရဲ့ အစီအစဉ် မှာ စတေးရမယ့်သူတွေ နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ခါဘစ် ပွဲပျက်. . . . ဘာစီလိုနာ ရဲ့ အစီအစဉ် မှာ စတေးရမယ့်သူတွေ နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဘာစီလိုနာ ကတော့ နေမာ ကို နွေရာသီ မှာ အရ ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ ကို အားစိုက် လာပြီး အသင်းရဲ့ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှုး ဂရစ်ဇ်မန်း ကို အလိုက်ပေး ကမ်းလှမ်း သွားဖို့ ရှိနေတယ် လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ ဟာ နေမာ နဲ့ လူတာရို မာတီနက် တိုက်စစ် အတွဲ ကို မက်ဆီ ၊ ဆွာရက် ရဲ့ နေရာ ကို ဆက်ခံ မယ့် သူတွေ အဖြစ် စိတ်ပိုင်း ဖြတ် ထားကြ တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဂရစ်ဇ်မန်း အပြင် ကော်တင်ဟို ကိုလည်း အသင်း ကနေ ရှင်းထုတ် သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
တိုနီ ဖာဂူဆန် နဲ့ ခါဘစ် နူမာဂိုမီဒေါ့ တို့ ထိုးသတ် ကြမယ့် UFC ပွဲဟာ ခါဘစ် ရဲ့ ရုရှ နိုင်ငံ အတွင်း ပိတ် မိ နေမှု ကြောင့် ရွှေ့ ဆိုင်းလိုက်ပြီ လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရက်ဘူး လိုက်ပ်ဇစ် အသင်း တိုက်စစ်မှုး တီမို ဝါနာ ဟာ ကမ္ဘာ ပေါ် က ဘယ်လို အသင်းကြီးမျိုးမှာ မဆို အံဝင် အောင် ကစားနိုင် မယ့်သူ ဖြစ်တယ် လို့ ဂျာမန် ကလပ် အသင်းဖော် တိုင်လာ အဒမ် က ထုတ်ဖော် အမွှမ်းတင် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
PSG အသင်း ကတော့ ဒေါ့မွန် ကို အနိုင် ရတဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ပွဲစဉ် အပြီး မှာ ပြိုင်ဘက် အသင်း တိုက်စစ်မှုး ဟာလန်း ကို လှောင်ပြောင်တယ်လို့ ယူဆ ရတဲ့ ယောဂ တရားထိုင် အောင်ပွဲခံမှု ကို အသင်းလိုက် ပြုလုပ် ခဲ့မှု ကြောင့် UEFA ရဲ့ အားကစား သမား မပီသတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ သတိပေးခြင်း ခံခဲ့ရ တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှုး ပေါ်လို ဒိုင်ဘားလား ကတော့ အီတလီ ရဲ့ လုံခြုံ စိတ်ချ ရမှု အားနည်းတဲ့ အခြေအနေ ကို ထိတ်လန့် သွားခဲ့ပြီး အသင်း ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ စိတ်ကူး လာနိုင်တယ် လို့ သတင်းထွက်ပေါ် ခဲ့ ပါတယ် ။
UEFA ဟာ လာမယ့် ဇွန်လ ထဲ မှာ ကစားဖို့ ရှိနေတဲ့ လက်ရွေးစင် အသင်းတွေ ရဲ့ ပွဲစဉ် အားလုံးကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ချန်ပီယံ လိဂ် နဲ့ ယူရိုပါ လိဂ် တိ့ု ဟာလည်း ပြန်လည် စတင်မယ့် အချိန် ကို မရွေးချယ် နိုင်သေးဘူးလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အေစီ မီလန် ကို ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်လာ ကစား နေတဲ့ တိုက်စစ်မှုးကြီး ဇလာတန် ဟာ အသင်းရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဘိုဘန် ကို ထုတ်ပယ်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပျက် နေကာ ပေါ်လို မာဒီနီ ပါ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါက သူလည်း အသင်း မှာ ဆက် ကစားဖို့ အစီအစဉ် မရှိတော့ ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် မှာ ကျင်းပမယ့် ဝင်ဘယ်ဒန် တင်းနစ် ပြိုင်ပွဲ ဟာ လည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ယခု နှစ် ပြိုင်ပွဲ ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ပြီလို့ အတည်ပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ အေစီ မီလန် ဂိုး သမားလေး ဒွန်နာ ရမ်မာ ကို ချဉ်းကပ် တော့မယ် လို့ အီတလီ ဂျာနယ်လစ် တစ်ဦးက ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။ အေစီမီလန် ကလည်း ဒွန်နာ ရမ်မာ ရဲ့ နေရာကို အစားထိုး ဖို့ အတွက် ပြင်သစ် ကလပ် နိုက်စ် ရဲ့ ဂိုးသမား ဝေါ်တာ ဘက်နီတက် ကို စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်
ဆာဂျီယို အဂွေရို ရဲ့ ကလပ်ဟောင်း အင်ဒီပန်ဒီယန်တီ က တော့ တိုက်စစ်မှုးကြီး ကို စီးတီး နဲ့ စာချုပ် ကုန်သည် အထိ မစောင့်ဘဲ ယခု နွေရာသီမှာတင် အသင်းဟောင်း ထံ ပြန်လာဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ အဲဗာတန် တို့ ဟာ ဒေါ့မွန် ကွင်းလယ်လူ မာရီယို ဂေါ့ဇီ ကို ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ်လိုပ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဝက်စ်ဟမ်း ကတော့ နွေရာသီမှာ ဘာစီလိုနာ အသင်းက ရောင်းထုတ် မယ့် တိုက်စစ်မှုး မာတင် ဘရိသ်ဝိတ် ကိုလည်း ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။